Indlela ukulinda umfana ebuthweni: iseluleko ngokwengqondo for girls. uhlamvu ibutho
Cishe zonke intombazane yesibili ngesinye sinqotshwe umbuzo: kanjani ukulinda guy ebuthweni? Hhayi-ke, uma eyoba e nobuhlobo nomuntu osekhonze kakade. Kodwa uma umfana kuphela ukuba kuthunyelwe ibutho, intombazane kufanele izilungiselele okulindele ngonyaka BakaJehova futhi ngifisa. Nakuba ungenza kulezi zinsuku 365 elikhiqizayo. Bese kuthi-ke ngonyaka fly ngokushesha.
Lapho wayemhlonipha guy wezempi, yena, yebo, ngeke kube buhlungu, izizwe inesizungu futhi icindezelekile. Futhi lokhu kuyaqondakala. Nokho, akubona bonke kubi njengoba kungase kubonakale. Phela, basuke babe insizwa uzokwazi ukubona!
Okokuqala, ngamunye athole amaviki ambalwa kamuva balindele isifungo. Lokhu senzakalo esikhulu, okuyinto eyenzeka lokuphila komuntu kanye kuphela. Ngenxa kubaluleke kakhulu kuye ngesifungo kwafika abantu abathandekayo. Futhi-ke, ethandekayo. Uma ufika, amasosha bayokwazisa lesi senzo. Ngaphandle intombazane ngakho-ke ayinike ukwesekwa zokuziphatha. Nalapha futhi eqiniseka ukuthi kwenzekani ukulinda kuye.
Ngemva isifungo uvamise ukunikwa ukuxoshwa. Nokho, ukuphepha kwe-passport ka omunye wabazali kwesesosha. Kodwa uma intombazane uzoya isifungo nabo, bese siyenza. Futhi bangakwazi ukuchitha ngempelasonto ndawonye.
Esikhathini esizayo, amasosha nazo zivunyelwe ukuba zithathe amahlamvu azikaze zibe khona. Uma uhlala kude ecaleni futhi unethuba ukuza, ba uzokwazi ukubona. emihlanganweni eqhutshwa njalo, ngisho noma okwesikhashana, ungakwazi alulaze ukulindela. Futhi zombili kuyoba lula zidlule kulo nyaka.
Amantombazane amaningi bakhathalela kakhulu akuyona kanjani ukulinda guy evela ebuthweni, bese, yini okufanele uyenze kulo nyaka. Ake sithi umsebenzi wayo oyinhloko - isifundo noma emsebenzini. Futhi mhlawumbe omunye, futhi omunye. Kodwa yini okufanele uyenze nge-spare time sakho? Phela, ngaphambi kokuba wagcwala imihlangano nabantu obathandayo futhi bahlanganyele emisebenzini iqembu.
Nokho, kubalulekile ukuba bazigcina bematasa ngokuthile zikusize ngakho konke okusemandleni. Ngokwesibonelo, ukuqala kokuya ejimini. Ngakho ukuthi lapho umfana ebuya kwezempi, yena wabona asemahle yakhe ayithandayo futhi wesilisa kusimangaze ukuguqulwa ngaphandle kulona.
Ungaqala ukuba lifunde olunye ulimi noma ukuthuthukisa lokuma kwazo. Thola elinye isikhathi ingxenye ukuba bonge imali iholidi ezikanye obathandayo. Futhi mayelana isipho ngesikhathi a demobilization ungayeka ukucabanga, ngoba iholidi endaweni ezinye olunothile kuyoba umbukiso omuhle. Uma intombazane ibuthakathaka ekuphekeni, kungaba kuhle ukuqala ukufunda ukupheka izitsha othanda abathembekile bakhe. Lapho befika kule ndawo, yena ngeke sijabulise ababulawa indlala isosha into esihlwabusayo. Ngokuvamile, kungcono hhayi ukulangazelela othandekayo, futhi bazijabulele okuthile okuthakazelisayo ngesikhathi esifanayo ewusizo.
Izindaba ezivela ekhaya
Naphezu kweqiniso lokuthi ethandekayo ikude le ntombazane, wafuna ngandlela-thile ukuveza imizwa yabo ngaye. Khona-ke ungakwazi (kufanele) abhalele ibutho. Futhi kungcono ephepheni njengoba imibono eminingi ngangokunokwenzeka. Amasosha enkonzweni injabulo encane bese uthole okuningi ngokubabhalela nje injabulo. Yini ukutshela izindaba zabo? Zonke nakho konke. Kwenzekani ekhaya, edolobheni lakubo, iziphi izinguquko kanye nezindaba. Ungakwazi ukuxoxa izinhlelo zabo, ngalokho wanquma ukwenza nje akusiyo abathembekile. Futhi-ke, ngeke akwenze ngaphandle amagama mnandi. Qiniseka ukuthi ubhale imisho embalwa ngemizwa yabo futhi ngokuthi ingakanani yena ulinde isosha wakhe, futhi okuningi zikuthola sishoda. ukwesekwa Zokuziphatha kubaluleke kakhulu.
Ngokuthumela incwadi impi, kubalulekile ukubeka ku isipho esincane. Inketho engcono - isithombe ahlangene format encane. Kungcono laminate nokuma kwesosha lingasuki bangaqhubeka ekhukhwini futhi ungakhathazeki ukuthi uzothola ezimanzi uma imvula. Asikho isidingo ukuthumela inani elikhulu izithombe ku izingcezu eziningana futhi zonke izinhlobo izindondo ngamaketanga nezinye izinto eziyisikhumbuzo - abavamile ayivunyelwe ukugcina izimpahla endaweni eydijithali (futhi konke okungenhla ephaketheni lakho akunakwenzeka ukuba nempilo enhle). Ngaphezu kwalokho, uma imvilophi sinzima kakhulu, kungaba ayovuleka futhi wathola la mathuba.
Iphasela okuthunyelwe, ngasendleleni, nayo ingathunyelwa. Badinga kuphela ukwazi kusengaphambili ukuthi udinga isosha. Ngokuqinisekile cha be nhlakanhlaka ukushefa Foam, imoto, i- umnikazi ngokuba isixubho nento esiphundu, isb ushokoledi. Kungcono ukubeka kancane, ngoba amasosha njalo wabe nabo bonke abalingani. Futhi, ungakwazi ukufaka ubakakimbili ukwakha buttonhole futhi zamagama igama layo ebeleni kwesokunxele. Kungenxa yempi ungalilahli out.
Ukuthi ochwepheshe basikisela?
Umbuzo ophathelene nokuthi ukulinda guy evela ebuthweni, iseluleko ngokwengqondo kukhona ithuluzi elihle. Amanye amantombazane kungaba nzima ukumelana nalesi sikhathi. Futhi usizo ayiveli indawo.
Okokuqala, kufanele siqonde ukuthi intandokazi empini. Lena akuyona ekamu yezingane. Kukhona izimiso eziqinile neziqondiso. Udinga ukujwayela izingcingo, okuzoba ngezimpelasonto kuphela, futhi ukungabi khona abakholwa amanethiwekhi omphakathi. Amasosha awavunyelwe ukusebenzisa i-intanethi futhi ucingo ngesikhathi umsebenzi kanye namathuba okuqeqeshwa. Ucingo ekhishwe kubo kuphela ngoMgqibelo nangeSonto. Ngenxa asikho isidingo ukugcwalisa imibuzo abawuthandayo mayelana nokuthi kungani engazange shayela, futhi ukulwa ngakho e hysterics. He is kakade akulula. Odokotela bengqondo ukweluleka kangcono esikhathini esingaphansi kwesonto encwadini ahlukene ekulobeni nezindaba ukuthi ukukubuza isosha yakho, futhi izindaba ezibalulekile futhi ezithakazelisayo. Ngoba lapho ekugcineni guy ubiza, injabulo nonke fly aphume ikhanda lami. Isikhathi kuyoba kancane.
Ukucinga abangane e amashwa
Amantombazane amaningi anganqamuki baye bacabange kuphela ngezithombe into eyodwa - indlela ukulinda guy ebuthweni. Amathiphu isazi sokusebenza kwengqondo esiqinisekiswa ngakho: uma isihloko akuyona haunted ngempela, sekuyisikhathi uzithola nabangane intombazane e amabhadi. Isibusiso nasenkathini ubuchwepheshe besimanje akunzima. Kunezindlela ezihlukahlukene zokuxhumana, kanye kuzo - nenqwaba imiphakathi. Mane nje ufake inombolo okuyingxenye, okuyinto intandokazi, bese uya injini yokusesha esikhishwe iqembu. Kukhona ungaxoxa, ufunde izindaba ezithakazelisayo, uphawula iwusizo ulwazi. Ngokuvamile, engumngane ungase uzithole nganoma iyiphi indlela. Futhi unganquma ndawonye ukuthi kumelwe enzeni lapho le nsizwa empini.
Yini enye engingabuye ngiyenze ukwazi?
Uma intombazane uyacabanga ukuthi ukulinda guy wezempi, hhayi ngoba wayengazi ukuthi yini okufanele uyenze ngalesi sikhathi, kodwa ngenxa yokuntula kwabo siqu yokuqiniseka ke, khona-ke kungcono hhayi elinga ukhanda. Kodwa kwenzeka kaningi. Intombazane ubizwa ngokuthi, ungahambi up, isifuna ukuchitha zonke izinsuku umfana, uthole izipho imizwa acacile futhi hhayi ngizithola futhi ukukhumbula ekhaya. Khona-ke akumelwe siyeke izithembiso ezingesilo iqiniso, akhohlise leli sosha. Phela, wayehawukela ngeke ukholwe ukuthi isiqalo sakhe sithandwa futhi kulindeleke. Futhi ngokuvamile akudingeki ukuqala ubuhlobo nothile, uma ungahambi up. Kwabaningi-ke kungukuqonda kuwufanele.
Kodwa uma intombazane wachitha guy ebuthweni futhi uhlose ulinde, khona-ke kukhona indlela ehlukahlukene izinsuku zabo ngaphandle kothandekayo. Ungakhetha ukwenza ikhalenda dembelsky. Njengoba ojwayelekile, phezulu, ngokuvamile ibonisa ngonyaka (.. 2016 th, 2017 th, nokunye), uyabhala: "uhlala ukulinda." Futhi ezansi, esikhundleni izinyanga - inani lezinsuku. Ucala 365-m futhi iphela kuqala. Angakwazi ukuphatha nsuku zonke ukuze bawele elinye usuku ngaphandle uthembekile, futhi ubale tingaki tibali. Abaningi namanje kuhlobisa ikhalenda izithombe ngokuhlanganyela.
Ngokuvamile, uma uza ekuphileni yentombazane isikhathi lapho ecabanga indlela ukulinda guy wezempi, kungcono ungalahlekelwa. Ipulani ngonyaka ukuze yadlula ngokushesha futhi ngempumelelo.
Ukuziphatha nasezimisweni zokuziphatha emphakathini wanamuhla
Indlela zephule ubungane nomuntu intombi: 10 Amathiphu
Ngazi kanjani ukuthi lowo owayeyintombi yakhe? Kunendlela!
Beer "Delirium tremens": incazelo, umlando, amaqiniso athakazelisayo
Prawns in Batter, iresiphi eziyokhanga bonke!
Ingabe amakati inkaba? Sithola lapho cat inkaba
Badlony: yini lena?
Lezi zincwadi ethandwa kakhulu. uhlu imisebenzi
Emahhotela aphambili e-Amsterdam, okuzokwenza ukwanelisa ngisho izivakashi olindele kunazo
Indlela ukupenda amehlo